19/03/2018 15:00 -5 mn Alahady 18 Martsa 2018
"Koa samy hotsaraiko araka ny ataonareo avy hianareo, ry taranak' Israely, hoy Jehovah Tompo. Mitodiha, ka mibebaha amin'ny fahadisoanareo rehetra, dia tsy ho tonga fahatafintohinana mahameloka anareo intsony izany." Ezekiela 18,30 => Tsy fiovana amin'ny am-pahany fa manontolo no iandrasan' Andriamanitra amintsika mba hamelany ny helotsika....
11/03/2018 10:24 -5 mn
Lesona: Mora ny Fahotana izay manakatsakana antsika tsy ahazo satroboninahitra Asa 3,19 "Koa mibebaha hianareo, ka miverena hamonoana ny fahotanareo, mba ho avy izay andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny Tompo. "...
27/09/2017 21:46 -Sekoly Alahady: hanomboka ny 8 oktobra 2017 izao.
Nisy ny pré-rentréé tamin'ity taona ity ho fandaminana ny taom-pianarana sy mba hanatrarana ny tanjona...
15/04/2016 21:44 -Misy ny BIBLIO-BUS eo anivon'ny sekoly alahady
Misy boky maro mahakasika ny lesona Sekoly Alahady ao amin'ny Biblio-bus....
27/12/2015 15:48 -Alahadin’ny sampana Sekoly Alahady ( 13 Desambra 2015)
. Niavaka ny fankalazana ny alahadin’ny sampana Sekoly Alahady teto amin’ny fitandremana Ankadifotsy tamin’ity taona 2015 ity satria nisy fampisehoana an-tsehatra ny tolakandro....
29/12/2014 14:53 -5 mn tamin'ny alahadin'ny Sekoly Alahady (14 desambra 2014)
“sketch” izay natolotry ny kilasy faha-7 (14 taona) niaraka tamin’ny mpampianany Atoa Ramarozaka Léon....
29/08/2014 07:13 -FIDIRAN' NY SAMPANA SEKOLY ALAHADY.
Taorian'ny fiatoana kely, ny fianarana Sekoly Alahady dia hiantomboka indray amin'ny 21 Septambra 2014 izao, eo anelanelan'ny fanompoam-pivavahana roa. tongava soa daholo rankizy!!!!...
24/07/2014 16:54 -Fizarana valisoa Sekoly Alahady 2014
Amin'ny Alahady 27 Jolay izao, amin'ny oran'ny Sekoly Alahady ny fizarana ny valisoa ho an'ny mpianatra sekoly alahady nanao fanadinana rehetra....
20/01/2014 06:02 -FIFAMPIZARANA: tao amin’ny Vondrom-bavaky ny sampana Sekoly Alahady
“Ampiasao izay nomen’ny Tompo anao” “Dia toy izany koa isika, na dia maro aza, dia tena iray ihany ao amin’ny Kristy, ary samy miara-momba ny tena isika rehetra.” Romana 12: 5 no tenin’ny Soratra Masina nitondrana izany....
09/07/2013 07:32 -5mn: 23 jona 2013
45 taona lasa izay dia nisy zava-niseho teto Madagasikara, inona moa izay rankizy ? tsy misy mahalàla ve ? ankalazaintska amin’ity volana jona ity izay. 45 taona izay no niorina ny fiangonana FJKM. Inona moa Rankizy no tena iorenan’izany fiangonana FJKM izany ? ny finoana an’Andriamanitra Ray sy JEsoa Kristy ary ny Fanahy Masina. Ary zavatra 3 lehibe no mitoetra eo amin’ny fiangonana tena kristiana: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana...